Portrait/ Felana, vehivavy mahefa | Grandir à Antsirabe
Portrait/ Felana, vehivavy mahefa
PORTRAIT : Nazava ho azy tato amiko hoe hiasa ho an’ny manodidina ahy aho. Misahana ny ekipa mpilatsaka an-dalambe amin’ny alina ao amin’ny Grandir à Antsirabe hatramin’ny taona 2013 i Felana. Mizara amintsika ny tantarany ary izy amin’ity lahatsoratra ity.
Hono hoy aho ry Felana, rehefa misahana ny ekipa mpilatsaka an-dalambe (EMA) amin’ny alina ianao, dia toy ny ahoana ny tontolo andronao ?
Raha ohatra ka ny Alatsinainy no resahina, dia manomboka izany amin’ny fametrahana ny fandaharam-potoana ny herinandro . Avy eo manao ny fanomanana ny maraude : ny hetsika atao, manaramaso ny entana rehetra tokony ho entina, ny fiara, ny trousse de soin. Vita ny fanomanana rehetra dia mikarakara sakofa ho an’ny ekipa handeha. Tsy adino ny dite izay ho zaraina ho an’ny ankizy izay hita eny an-dalana. Manomboka ny maraude amin’ny 08h alina ary mifarana amin’ny 11h. Misy mpanabe, mpiasan’ny fahasalamana sy mpitsidika ihany koa indraindray miaraka aminay. Ny ampitson’io dia dia manao tsoan-kevitra tamin’izay hita rehetra ny alina ny mpitsidika sy ny ekipa, mifampizara ny zavatra rehetra hita tany mba ahafahana manaraka ireo ankiz. Ankohatra ny asako amin’ny maha mpiandrikitra ny EMA ahy dia miaraka amin’ny ekipa ny Fanarahamaso ara-tsosialy (AS) koa aho.
Mba hazavao aminay aloha ilay atao hoe « maraude » e ?
Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina no manao azy io izahay. Mandeha eny an-dalambe mijery ireo ankizy matory eny an-dalana. Mihezaka mamantatra ny antony nahatonga azy teny mba ahafahana manampy azy ireo hiverina indray any amin’ny fianakaviany sy ny firaha-monina na any amin’ny toerana afaka mandray azy hafa. Mihaino azy ireo izahay, mitsabo ihany koa ireo tsy salama, mampilalao azy ireo sy manabe azy amin’ny alalan’ireo fanentanana samihafa.
Inona no antony nisafidianana hiasa ato amin’ny Grandir à Antsirabe ?
Ohatra ny hoe antso angamba ! Rehefa avy niasa tamin’ny fampianarana sy ny resaka informatique taona vitsivitsy aho dia tsapako fa misy faniriana hafa ao amiko. Tia hiasa hanampy ny manodidina ahy aho. Izany no nahatonga ahy hiasa amin’ny Fikambanana.
Ny iray tsara indrindra ve ? Hum, ny fandraisako anjara tamin’ny fananganana sy ny fametrahana ny Fandaharanasa ho Fiharovana ny Ankizy miaina eny an-dalanambe (PPER). Taloha, kilasy mandry ihany no nisy, nefa rehefa nisy fikarohana natao dia naverina nojerena ny filana sy ny tanjona ary napetraka tao arinan’izay ny fandaharanasa vaovao.
Ahoana ny fihitana ny fikambanana any ahoriana any ?
Tsara ! Misy fahavitrihana miavaka ato amin’ny fikambanana. Mila tohizana sy tazomina izany. Isika ihany koa dia mitondra fanantenana ho an’ny ankizy miaina eny an-dalambe, maninona moa raha asiana maraude maromaro anaty herinandro iray ?
Liona vavy : tena tsara tarahery izy ireny sady mahavita mihatrika ady mafy, mamaritra tsara ny toetrako izany.
Nelson Mandela. Tena nijaly izy ho an’ny mpiray tanindrazana aminy ary niady mafy mba hanaovana ny tsara manodidina azy.
Raha zavatra indray ?
Finday, aminy alalany dia afaka mitoetra amin’ny toerana roa ianao. Sady afaka hanaovana zavatra maro tena ilaina hafa ko izy.
Izaho tena tsara fanahy fa indraindray mahitsy loatra rehefa miteny dia mandratra ny olona sasany.
Toetra tsara ?
Tia karokaroka, ilaina be mihintsy amin’ny maha mpaka sary ny tena. Mila mandry ilika sy mandinika tsara ary mikaroka vao mahavita maka sary tsara.
Ary raha teny filamatra kosa ?
Ity dia avy aty amiko : « Araho izay lazain’ny fonao fa aza manaiky hararaotina fotsiny »
Ary raha taovam-pandrenesana iray amin’izy dimy ?
Ny maso, Izy no mahita ny zavatra rehetra, ahafahako mandinika ary ahafaako miasa avy eo
Hafatra farany ary Felana a!
Misaotra ny rehetra miasa hanatsara ny Fikambanana. Tena mahafinaritra ahy ny miasa ato isan’andro miaraka amin’ny ekipa.
Lire aussi : Ireo mpilatsaka antsitra-po mihetsika eto Madagasikara
MG	Portrait/ Noro, olon’ny asa sôsialy
Non classifié(e)	Portrait/ Mamy, tovovavy mpikirakira tarehimarika…